Ngwaọrụ nke AirPods ga-enwekwa akụkọ | Esi m mac
Toni Cortes | 07/06/2021 23:35 | ọtụtụ
Ihe ngosi nke WWDC nke afọ a. Tim Cook na ndị otu ya egosila anyị ozi ọma a ga-etinye na nsụgharị nke ngwanrọ a n'afọ a. Nke a pụtara na ka ukwuu ma ọ bụ pekarịa ala, ngwaọrụ Apple niile ga-enwe ọrụ ọhụụ ozugbo enwere ike imelite ha.
Na "niile" na-agụnye ndị AirPods. Mgbe emelitere ngwaọrụ ụlọ ọrụ ahụ, ekweisi Apple ga-enweta atụmatụ ọhụrụ, ụfọdụ n'ime ha na-atọ ụtọ maka ndị ọrụ. Ka anyị hụ ha.
Ndị ụmụ okorobịa si Cupertino echefughi AirPods, ha ga-enwetakwa ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ ngwa ngwa ewepụtara sọftụwia ọhụrụ niile maka afọ a.
1 Nkwalite Mkparịta ụka
2 .Ma ọkwa
3 Chọta AirPods m
4 Gbasara ohere Audio
Nkwalite Mkparịta ụka
Nke a bụ ihe izizi AirPods nke ahụ Tim Cook na ndi otu ya webatara anyi n’ehihie a. Ihe ngosi emebere iji nyere ndi nwere nsogbu inunu nsogbu aka. Ihe ohuru nke n’eji igwe na igwe komputa na igwe okwu nke AirPods Pro wuru na microphones na-eleba anya n’onodu onye natara n’ihu gi.
Nwekwara ike ịhọrọ ibelata ego nke mkpọtụ ihe na-eme gburugburu gị. Njirimara abụọ a nwere ike igbochi mkpọtụ gbara gburugburu ma mee ka mkparịta ụka gị na onye nọ gị n'ihu dịkwuo ukwuu.
Siri na-agwa gị ọkwa ọhụụ maka obere oge, ma ugbu a ọ na-eweta arụmọrụ ahụ na ọkwa niile yana Kwupụta ificationsma Ọkwa. Ugbu a, ị nwere ike gbanwee atụmatụ a ka ọ kpọsaa ọkwa gị kachasị mkpa. Younwere ike iji ọkwa iji chetara gị ihe ị ga-azụta n'ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na ị mepụtara ụfọdụ ihe ncheta na ọnọdụ ụlọ ahịa na ngwa Ncheta.
Enwere ike ịhazi njirimara ahụ naanị ịkpọsa ọkwa sitere na ngwa nke ị họọrọ, ma ị nwere ike ịgbanye Do not Disturb iji gbanyụọ ha kpamkpam. Apple kwukwara na ọ bụrụ na ị jiri atụmatụ ọhụrụ ahụ Focus nke na-ekewapu onwe gi na ndu oru gi, a gha etinye uche na ihe ngosi gi.
Chọta AirPods m
Ọhụrụ Apple software mmelite ga-ekwe ka ị chọta gị AirPods Pro o AirPods Max Echefuola na Chọta ngwa, dị ka nke ọhụrụ AirTags. Ọ bụrụ na ị tufuo ha, AirPods gị ga-eziga ọnọdụ ha site na Bluetooth nke ngwaọrụ Apple ndị ọzọ nwere ike ịchọpụta. Nwere ike iji ngwa Chọta M ka ha kpọọ ụda ma ọ bụ jiri echiche nso iji mara mgbe ị nọ nso ịchọta ha. Ngwa a Chọta M ga-emekwa ka ị mata ugbu a ma ọ bụrụ na ị hapụ AirPods gị na mberede.
Gbasara ohere Audio
Apple na-eweta nkwado ọdịyo gbasara ohere gbasara TVOS yabụ ị nwere ike ịnweta ụda gburugburu gị na AirPods Pro ma ọ bụ AirPods Max n'ime ụlọ gị na-enweghị nsogbu onye ọ bụla ọzọ. Nkwado ọdịyo gbasara ohere gbasara AirPods na-abịakwa macOS maka Macs dabere na processor ọhụrụ M1. Ohere Spatial na-abịakwa Apple Music na ngwa FaceTime.
N’ụzọ doro anya, iji nwee obi ụtọ na njirimara ndị a niile, ma ndị AirPod ma ngwaọrụ kwekọrọ nke na-agbasa ozi egwu ịchọrọ ige ntị ga-emelitere. Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta, ị nwere ike ibudata betas mbụ. Ọ bụrụ na ịnọghị, ịkwesịrị ichere ruo opekata mpe ọnwa nke July iji nwee ike ịnwale izizi ọha na eze. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ndidi, ị ga-eche maka nsụgharị ndị ọrụ maka ndị ọrụ niile Apple ga-ebido n'oge okpomọkụ ikpeazụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ngwa ngwa nke AirPods ga-enwekwa akụkọ